HomeDharmaऋणको बोझले हैरान हुनुहुन्छ ? यी ७ सजिलो उपायले राहत दिन्छ
धेरै पटक ऋणको कारण मानिसलाई मानसिक तनाव हुन थाल्छ । यो तनाव यति प्रबल हुन्छ कि मानिसहरु नसोचेको कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । भन्न त भनिन्छ जति ठूलो च्यादर छ त्यती नै खुट्टा फैलाउनुपर्छ तर पनि मानिस ऋणको जालमा फ से का छन् । ऋणका कारण व्यक्तिको आर्थिक अवस्था नाजुक हुन थाल्छ । यदि तपाई पनि ऋणको चपेटामा हुनुहुन्छ भने । कडा परिश्रम गरेर पनि ऋणबाट मुक्त हुन सकेन भने ज्योतिष शास्त्रमा केही उपायहरु बताईएको छ, जसलाई अपनाएर तपाई ऋणको बोझबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ, साथै तपाईको धन सम्वन्धी समस्याहरु पनि हटाउन सकिन्छ ।
यी चरणहरू गर्नुहोस्स्
१ मंगलबार शिव मन्दिरमा जानुहोस् र शिवलिंगलाई दूध र जलले अभिषेक गर्नुहोस् र दाल चढाउनुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ बसेर ऋन्मुक्तेश्वर मन्त्र ओम रिन्मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कम्तीमा एक माला अर्थात् १०८ पटक जप गर्नुहोस्।
२ प्रत्येक मङ्गलबार र शनिबार हनुमानजीलाई तेल र पहेंलो सिंदूर चढाएर हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्। यसो गर्नाले ऋण सम्बन्धी सबै समस्या हटेर मन शान्त रहन्छ।
३ राती आफ्नो टाउको छेउमा भाँडामा जौ भरी राख्नुहोस्। बिहान उठेर नुहाएर जौ कुनै खाँचोमा परेकालाई दान गर्नुहोस्। यसो गर्नाले बिस्तारै धन सम्बन्धी समस्याको अन्त्य हुन थाल्छ । ऋण मुक्तिसँगै आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुन्छ ।
४ बुधबार डेढ सय ग्राम मुगलाई उमालेर घ्यू र चिनी मिसाएर गाईलाई खुवाउँदा ऋण छिट्टै मुक्त हुन्छ ।
५ बाँदरलाई शख्खर चना र केरा खुवाउँदा, गाईलाई रोटी, माछालाई पिठो र चरालाई दाना खुवाउँदा पनि ऋणबाट मुक्ति मिल्छ।
६ वास्तुका अनुसार पूर्वोत्तर कोणलाई सफा राख्नुहोस्। यसो गर्नाले ऋणबाट छिट्टै छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
७ शुक्ल पक्षको बुधवारदेखि नियमित रूपमा ऋणी गणेश स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस्। यसो गर्नाले ऋण सम्बन्धी सबै समस्या हट्छ ।
Previous articleLakshmi God : यी ४ राशिका मानिसमा सधैँ रहन्छ माता लक्ष्मीको आशिर्वाद !
Next articleनेपालमा थप १९ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ जना निको भए